AH: ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် ဘလော့ဂ်ဂါတို့အမြင် (တဂ် ပို့စ် )
ငါးထောင်တန်ဖုန်း အကြောင်း တဂ်ထားမှန်းသိပေမယ့် စင်ကျားပေါရောက်မှ အလုပ်တွေထပိနေလို့ ပြန်မဖြေနိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ အမှန်ဆို တရုတ်ကနေပြန် စင်ကျားပေါရုံးကို ရောက်ကြောင်းသတင်းပို့၊ သုံးထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ပြန်တောင်း၊ ရုံးကနေလစ်ပြီး အိမ်မှာ ကွေးနေရမှာဖြစ်ပေမယ့် အငြိမ်မနေ ရှိသမျှ ရုံးကလူတွေကို လိုက်နှုတ်ဆက်ရင်းကနေ new building မန်နေဂျာက သင်္ဘောအသစ်အတွက် ပုံတွေကို စစ်စေ ဆိုပြီး အမိန့်ချလိုက်သောအခါ ပုံစစ်ရုံမက၊ ပုံဆွဲဘ၀ပါ ရောက်သွားပြီး ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ကိုယ့်သင်္ဘောမဟုတ်တဲ့ ပုံတွေကို လျှောက်ကြည့်နေရင်း ကောင်းကောင်းမနားရပဲ တွတ်ပီ ကံမကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက် ရောက်တုန်းလေး ဟိုသွား ဒီသွား အတိုးချစား၊ ဂိမ်းဆော့ နေတာနဲ့ ဒီပိုစ့်အတွက် အကြွေးကျန်နေလို့ ခုပဲ ဒီ ငါးထောင်တန် အကြောင်းလေးရေးဖြစ်ပါတော့တယ် ခင်ဗျာ။ ဒီနေ့တော့ ရုံးမသွားရတာကြောင့် မဒမ်ကိုးနဲ့ ကိုမိုးဇက်တို့က တဂ်ထားတဲ့ ပိုစ့်လေးကို ရေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဒီ ၅၀၀၀ တန်ဖုန်းရဲ့ မူရင်း source ကတော့ ကိုသက်တန့်ချို ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို တဂ်တဲ့ မဒမ်နဲ့ ကိုမိုးဇက်တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ငါးထောင်တန်ဖုန်းကို တော်တော်များများလည်း ထင်မြင်ချက်ကလေးတွေ ပေးထားပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်ကလေးတွေကတော့..
၁။ ယခု ဆက်သွယ်ရေးက ချထားပေးမယ့် နှစ်သိန်းဝန်းကျင် ဖုန်းကို တန်ဖိုးနည်းဖုန်းလို့ သင်မြင်ပါသလား?
ဖြေ။ ။ နှစ်သိန်းတန် က စင်းမ် ကဒ်လား ဖုန်းလား မကွဲတော့ စင်းမ်ကဒ်အနေနဲ့ဆို များပြီးတော့၊ ဖုန်းပါတွဲပါမယ်ဆိုရင်တော့ မဆိုးလှဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ ဟိုရက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြတဲ့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကို သွင်းဖို့ဆိုပြီး ဖုန်းအဖြူလေးက Smart Phone ပါ။ ဘာတံဆိပ်မှန်းတော့မသိပေမယ့် အတော်လေးတော့ လှတပတရှိပါတယ်။ ဒါမျိုးဖုန်းကို စင်းမ်ကဒ်နဲ့ တွဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးမများလှဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။
၂။ ငါးထောင်တန်ဖုန်းပေါ်လာစေဖို့ စတေကာကပ်ခြင်း နဲ့ တီရှပ်များ ပြုလုပ်ခြင်းအပေါ် သင်ဘယ်လိုမြင် မိပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ အင်း.. ဒါလည်း တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးပဲ.. ဦးဆောင်သူက ဘယ်သူနဲ့ ဦးတည်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အကျိုးသက်ရောက်မှု့ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ရှိမယ်ဆိုတာကို မမှန်းတတ်ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုလုပ်တာကိုတော့ အားပေးပါတယ်။
၃။ ငါးထောင်တန်ဖုန်း ပေါ်လာစေဖို့ စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးလွှတ်တော်ကို တင်ပြခြင်းအပေါ် သင်ဘယ်လို မြင်မိပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ တီရှပ်၊ စတေကာကပ်တာတွေထက်စာရင် ဒါဟာ ပိုပြီးတော့ ဆီလျှော်တဲ့ တောင်းဆိုမှု့တစ်ခုလို့ မြင်မိပါတယ်။ အားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။
၄။ ငါးထောင်တန် ဖုန်းများပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ သင့်အနေနဲ့ ကြိုဆိုပါသလား?
ဖြေ။ ။ ဘယ်ဒေသတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရမယ်၊ ဒီအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်၊ ထပ်မံ ထည့်သွင်းရမယ့် ဆက်သွယ်ရေးတိုင် အရေအတွက်၊ ဒါတွေ အားလုံး ကျကျနန ထုတ်ဝေသူတွေက ချပြပြီးတော့ တကယ်တမ်း လူပေါင်းများစွာ အသုံးပြုလာတဲ့အခါမှာ ဖုန်းလိုင်းတွေ ကောင်းမွန်နေမယ့် စနစ်ဆိုရင်တော့ ၀မ်းသာအားရ အားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ မဟုတ်ပဲ ဟဲလို... ဟဲလို.. ဒုန်ရင်းဖြစ်နေရင်တော့ ဒါဟာ ညာစားတာနဲ့ တူတူပဲမို့လို့ အားမပေးပါဘူး။ မဟုတ်ရင် ပြည်သူတွေ ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး၊ ရှင်ကြီး ကျားထက်ဆိုး ဆိုသလို ဖြစ်နေပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက စင်းမ်ကဒ်ကို ငါးထောင်နဲ့ ရောင်းပြီးတော့ Pre-paid ကဒ်တွေကျတော့မှ ဈေးနှုန်းက အဆမတန်မများဖို့၊ Miss call တွေကို ပိုက်ဆံမဖြတ်ဖို့.. စသည် စသည်တို့ကို လည်း မထုတ်ဝေခင်ထဲက ကြိုတင်ပြီး ထုတ်ဝေသူများဘက်က ပြည့်စုံအောင် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ပြန်ပေးရင်တော့ တိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ ခင်ဗျာ။ ဒီမေးခွန်းအတွက်ကတော့ ကြိုဆိုပါတယ်။ တိုင်းထက်အလွန်ပါ။
၅။ ငါးထောင်တန် ဖုန်းအပေါ် သင့်အမြင်လေး တစ်ပိုဒ်လောက် ချရေးပေးပါ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာပြည် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက် ဖွံဖြိုးလာမယ်၊ တိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်၊ အဓိကအားဖြင့် အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ၀မ်းမြောက်စရာ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်း ဖုန်းကိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိတဲ့ လုပ်ငန်းပါ။ ဒီကနေ နိုင်ငံတော်က ရလာမယ့် ငွေကြေးဟာ လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတန်းစာတွေ လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး အိပ်ထဲထည့်နေတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ပဲ တိုင်းပြည်အတွက် နည်းနည်းလောက် စေတနာလေးထားနိုင်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကို ၀မ်းမြောက်မိမှာပါ ခင်ဗျာ။
Posted by AH at 3/08/2012 12:28:00 AM
နောင်တော် အမြင်လေး ဖတ်သွားပါတယ် ... ။
စံပယ်ချို March 8, 2012 at 2:00 AM
ဟုတ်ပါတယ်ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ပဲ တိုင်းပြည်အတွက် နည်းနည်းလောက်
mstint March 8, 2012 at 10:47 AM
တူညီတဲ့ခံစားချက်လေးတွေမို့ အကောင်အထည်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိတယ်ကွယ်။
မဒမ်ကိုး March 8, 2012 at 2:31 PM
ဒါနဲ့စကားမစပ် ကီလိုများတိုးလာသေးသလား ကိုအားထောင်း))
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) March 8, 2012 at 11:26 PM
ထောက်ခံပါတယ်၊ ထောက်ခံပါတယ် ...း)